external path command from cmd in Java — MYSTERY ZILLION
external path command from cmd in Java
command line ကနေ Java program တခု run တဲ့အခါမှာ C:\_>Java\_jdk1.6.0\_bin မှာ မသိမ်းဘဲနဲ့external folder တခုနဲ့သိမ်းပြီး Java ရှိတဲ့ နေရာတခုကို ခေါ် run ချင်တာပါ။အဲဒါ path ပေးတဲ့ ပုံစံမသိဖြစ်နေလို့ပါ။ကူညီပြီး ပြောပေးကြပါဦးလို့..ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
1. save in any directory (e.g, d:\_hello.java)
2. change the path in command prompt
ဟုတ်ကဲ့... အဆင်ပြေသွားပါပြီ. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.
path လမ်းကြောင်းပြောင်းပြီးသိမ်းတဲ့အခါ. ပထမဆုံး java\_jdk1.6.0\_bin ကို၀င်ပြီး
compile လုပ်တဲ့အခါမှာ javac (သိမ်းထားတဲ့ directory)ကိုရေးတဲ့အခါ Double quote ("")ထဲမှာ
eg: C:\_>Java\_jdk1.6.0\_bin>javac "D:\_New Folder\_Hello.java"
double quote မပါခဲ့ဘူးဆိုရင်
javac: invalid flag: \_New
Usage: javac <options> <source files> ဆိုပြီး error တက်ပါတယ်။
နောက်တနည်းက c:\_java\_jdk1.6.0\_bin ကိုမဝင်ဘဲ သိမ်းထားတဲ့နေရာကိုပဲဝင်ပြီး
path="C:\_java\_jdk1.6.0\_bin" လို့ခေါ် run လို့ရတဲ့နည်းကိုလဲ သိချင်ပါသေးတယ်. အဲလိုမျိုးနဲ့ရေးပြီး run တာမရဖြစ်နေလို့ပါ။
Java Install လုပ်ထားတဲ့နေရာကို C:\_java\_jdk1.6.0\_bin လို့ယူဆလိုက်မယ်။ Command Prompt ထဲမှာ ကိုယ်သုံးချင်တဲ့ executable files တွေကို Fullpath မပြောချင်ရင် အဲဒီ့ executable တွေရှိတဲ့ Location ကို Environment Variable "PATH" ထဲမှာပြောပေးရပါတယ် အဲဒါကြောင့် C:\_java\_jdk1.6.0\_bin ကို PATH ထဲမှာသွားထည့်ပေးရပါမယ်။ နောက်တစ်ခုက Java Interpreter ဟာ Execution မှာ Class တွေကိုလိုက်ရှာလေ့ရှိတယ် အဲဒီ့မှာလည်း သူ့အနေနဲ့က Java Installed Location ထဲမှာလိုက်ရှာတယ် တစ်ခြားနေရာမှာ Library တွေထားချင်ရင်လည်း Environment Variable "CLASSPATH" မှာပြောပေးရတယ် အဲဒါကြောင့် လက်ရှိရောက်နေတဲ့ Directory မှာလည်းရှာပါလို့ ပြောပေးရပါတယ် မဟုတ်ရင် Class not found ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အောက်မှာပြထားသလို Environment Variable တွေမှာထပ်ထည့်ပေးပါ။
(1) Right Click My Computer -> Properties -> Advanced System Settings -> Advanced -> Environment Variables
(2) User Variables and System Variables ဆိုပြီး နှစ်ခုတွေ့ပါလိမ့်မယ် ကွန်ပျူတာမှာ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်း သုံးစေချင်တယ်ဆိုရင်တော့ User Variables ထဲမှာပဲထည့်ပါ ဒါမှမဟုတ် တစ်ခြားသော User တွေကိုလည်း သုံးစေချင်တယ်ဆိုရင်တော့ System Variables ထဲမှာထည့်ရပါမယ် အဲဒီတော့ ဒါကတော့ ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ပါ။ တစ်ခုမှာထည့်တယ်ဆိုရင် လုံလောက်ပါပြီ နှစ်ခုလုံးမှာထည့်ဖို့မလိုပါ။
(3) PATH ဆိုတဲ့ Variable Name ကိုလိုက်ရှာပါ အများအားဖြင့် ရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ် တွေ့တယ်ဆိုရင် Select -> Edit ကိုရွေးပါ ပြီးရင်တော့ အထဲမှာရှိပြီးသား Values တွေကိုမဖျက်ပါနဲ့ အဲဒီ့နောက်ဆုံးကနေ ; တစ်ခုခံပြီးတော့ Java bin location ကိုထည့်ပါ။ ဥပမာဆိုရင်- ;C:\_java\_jdk1.6.0\_bin လို့ထည့်မှာပေါ့။ PATH ကိုရှာလို့မတွေ့ရင်တော့ New လို့ပြောပါ ပြီးရင်တော့ Variables name ကို PATH လို့ပေးပြီးတော့ Values နေရာမှာ ကိုယ့်ရဲ့ Java bin location ကိုထည့်ပါ။
(4) CLASSPATH ဆိုတဲ့ Variable Name ကိုလိုက်ရှာပါ Java Install လုပ်ထားရင် သူလည်းရှိပြီးသားပဲများပါတယ် Edit လုပ်ပြီးတော့ ရှိပြီးသား Values နောက်မှာ ;. လို့ထည့်ပါ။ အသစ်လုပ်တယ်ဆိုရင်တော့ . လို့ပဲထည့်ပါ။ Dot (.) ဆိုတာက လက်ရှိအလုပ်လုပ်နေတဲ့ Directory လို့ဆိုလိုပါတယ်။
(5) အဲဒါတွေပြီးရင်တော့ သုံးလို့ရပါပြီ Command prompt တွေဖွင့်ပြီးသားဖြစ်နေရင် အကုန်လုံးကိုပြန်ပိတ်ပြီး ပြန်ဖွင့်လိုက်ပါ။ ပြီးရင်တော့ ကိုယ်ရေးထားတဲ့ Java Program တွေရှိတဲ့ Directory ထဲကိုသွားပြီးတော့ လွယ်လွယ်ကူကူ Compile and Execute လုပ်လို့ရပါပြီ။
အရင်လို C:\_>Java\_jdk1.6.0\_bin>javac လိုခေါ်စရာ မလိုတော့ပါဘူး ဘယ်နေရာပဲ ဖြစ်နေနေ javac လို့ပဲသုံးလို့ရပါပြီ။
မှတ်ချက်။ Windows7ပဲလက်ထဲရှိပါတယ် တစ်ခြား Windows ဆိုရင်တော့ Environment Variables ထဲဘယ်လိုသွားသလဲ ကိုယ်တိုင်ပဲလိုက်ရှာပါ။ ကျန်တာအတူတူပဲ။
ဟုတ်ကဲ့... Path , CLASSPATH မှာ အစ်ကိုပြောသလိုထပ်ထည့်ပါတယ်။
java file ကို \_New Folder\_ အောက်မှာသိမ်းထားပါတယ်။cmd ကနေခေါ်တဲ့အခါ
ထဲထိမဝင်တော့ဘဲ C:\_>Users>PC Name>cd "D:\_New Folder\_Hello.java" လို့ခေါ် run တဲ့အခါမှာ The directory name is invalid , လို့ပြပါတယ်။
Path value ရဲ့နောက်ဆုံးမှာ ;C:\_Java\_jdk1.6.0\_bin လို့ထပ်ဖြည့်ပြီး
CLASSPATH ရဲ့နောက်ဆုံးမှာ ;. လို့ပဲ ထည့်ထားတာပါပဲ။
C:\_>......> ရောက်ရာနေရာကထွက်စရာလိုသေးတာပဲလား. ဘာလိုနေတာမှန်းရှာလို့မရဖြစ်နေတယ်.. ဘာလို့ Run လို့မရမှန်းမသိဘူးဖြစ်နေလို့ပါ။ကူညီပေးပါဦးနော်. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..
ဟုတ်ကဲ့.. ရသွားပီဗျ.. Environment Variable တွေမှာ ပြင်လိုက်တာပါ.
Path မှာတော့ C:\_Java\_jdk1.6.0\_bin ကိုထပ်ဖြည့်ပီး
Classpath မှာ C:\_Java\_jre1.6.0\_lib ထိပဲ ထားမှ အဆင်ပြေသွားပါတယ်
;. လို့ရေးခဲ့တုန်းက အပေါ်မှာ ပြောသလို error တွေဖြစ်တုန်းပါ.။အခု external folder ထားပီးခေါ်သုံးလို့ရသွားပါပီ။သိမ်းထားတဲ့နေရာကနေ compile လုပ်လို့အဆင်ပြေသွားတယ်။
အခုလို ကူညီပြီး အဖြေရှာပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။